Umfazi ofileyo kaKhabensky Anastasia Smirnova, ifoto. Umfazi omtsha wase Konstantin Khabensky - & # 128079; & # 128079; & # 128079; Olga Litvinova
Ngoobomi bakhe, abalandeli bakaKonstantin Khabensky banokufunda kuphela kwiinkcukacha zabangaphakathi ukusuka kwinqanaba elifutshane. Umdlali weqhawe ngokwakhe ugweme imibuzo engafanelekanga kumsebenzi wakhe.
Umfazi wokuqala waseKhabensky - Anastasia Smirnova
Ngo-1999, uKostya Khabensky owaziwayo, owayengaziwa kwizitrato kwaye akazange acele i-autograph kwinqanaba ngalinye, wahamba nomhlobo wakhe kwikhephe encinane yaseSt. Petersburg. Kwesinye itafile kwakuhleli nkampani yamantombazana, phakathi kwabo uConstantine waphawula i-brunette enhle.
Abantu abancinci badibana neengqungquthela, kwaye emva kwexesha uKhabensky wagqiba ekubeni ameme intombazana ayithandayo kwi-premiere yokusebenza kwakhe.
U-Anastasia Smirnova, umfazi wexesha elizayo lomculi, wasebenza njengomlobi wezithuba zomsakazo waseSt. Petersburg, kwaye ekuqaleni wayeyixhala malunga nolwazi olutsha: ngelo xesha uKhabensky wayenomfanekiso "kwi-Slaughter Force" - loo ntombazana yayingenakucingisisa malunga neendidi ezinjalo. Nangona kunjalo, sele sele idibaniselwano yokuqala uAnastasia waqonda ukuba oku akuyona into elula. Kwimvakalelo efanayo yayinoConstantine. Kwakuyintando ekuqaleni.
Kungekudala uConstantine no-Anastasia banquma ukuba baya kuhlala kunye kunye neminyaka emibini kamva batshata, kwaye kubhalisi bahamba kwii-sweaters kunye nejee, begqiba ukuba bangayilungiseleli umtshato oqaqambileyo.
Vala abantu babecinga njengombini ococekileyo-ngoko kuhambelana ubudlelwane kwintsapho eselula. U-Anastasia noConstantine bancedisana ngokugqibeleleyo, umdlali wecala wazama ukuthatha umfazi kuyo yonke ihambo.
Umsebenzi wokuChabensky wawuphuhlisa ngokukhawuleza. Ngo-2004, umdlali wendima wadlala indima ephambili ka-Anton Gorodetsky eTimur Bekmambetov "Night Watch". Ifilimu, idutshulwa kwintlobo yeendalo zedolophu, ibe nempumelelo engafanele kwi-ofisi yebhokisi, kunye noKhabensky, njengoko bethetha, bavuke badumileyo. Emva konyaka kwabonakala "iMboniselo yoSuku", eyomeleza impumelelo ye-blockbuster.
Ekuphakameni kwenkwenkwezi uKonstantin Khabensky waqala ukubiza iindibano ezingapheliyo, echaza imeko ngento yokuba, umlingisi kunye nomkakhe abanako ukufumana umntwana. Ekuqaleni kuka-2007, kwaziwa ukuba u-Anastasia ukhulelwe. Umdlali we-actor akazange afihle iindaba ezivuyayo, kwaye zonke iingxolo zayeka.
Xa kufika ixesha lokuzalwa, u-Anastasia wangena engozini yemoto. Nangona ukuba ingozi yayingabalulekanga, emva koko oogqirha banquma ukuba ngenxa yengozi ibhinqa lalinomsila omncinci, okhokelela ekugqithweni kwengqondo. Ubulwelwe obukhulu kwi-Anastasia Khabensky ogqirha bafumane kwiinyanga zokugqibela zokukhulelwa.
Yena noAnastasia yena kunye nosapho lwakhe bayayikrokra umhlaza. Ubume bakhe obungabalulekanga bempilo, owesifazane okhulelwe unxulumene nezinguqu zendalo emzimbeni. Emva kokuba oogqirha bexilongwa, umfazi waseKhabensky wenqaba unyango: iziyobisi ezinamandla zingathintela uphuhliso lomntwana ongakazalwa.
Le nkwenkwe, eyayibizwa ngokuba nguVanya, yazalwa ngenxa yesigaba seKesariya. Emva kokuzalwa kwonyana wakhe u-Anastasia waba mbi kakhulu, kwaye wahanjiswa kwiyunithi yonyango olukhuselekileyo esibhedlele, waza waya kwisiko. N. N. Burdenko, apho iqela lalisuswa khona kwaye kwenziwa ikhefu ye-chemotherapy.
Emva kokusebenza, uConstantine no-Anastasia batshata ngqo kwidilesi yesibhedlele, apho lona wesifazane wadluliselwa kwiyunithi yokunyamekela. Kwiinyanga ezimbini emva koko, i-tumor yaqala ukuqhubela phambili.
Ukuzama ukugcina umfazi wakhe oyintanda, umdlali wecala waya naye kwelinye leekliniki ezilungileyo kakhulu eLos Angeles. Esi si bhedlele, ezininzi iinkwenkwezi zaseHollywood ziye zahlengahlengiswa. Isiqingatha ngonyaka oogqirha bazama ukugcina iAnastasia, befaka kuye zonke iindlela zokwenza unyango. UConstantine waqhekeka phakathi kweLos Angeles noMoscow. Ngeli xesha, umlingisi uthatha zonke iiprojekthi anikezelwayo ukuze athathe imali ukugcina umfazi wakhe. Ngaloo ntsuku umdlali wadutshulwa kwifilimu ethi "i-Admiral", kodwa akukho namnye wababukeli abafika kwi-premiere yomfanekiso, abazange bazi ukuba yintoni intlekele eyenzekayo ekupheleni komdlali odlala umdlalo weAdmiral Kolchak ...
Ukufa kuka-Anastasia ngoDisemba 1, 2008 kwakungenxa yomdlali onzima. Umfazi waseKhabensky wasweleka kwiingalo zonina, ongazange amshiye embhedeni wakhe.
Ubomi emva kokufa komfazi wakhe: Ukunceda abantwana abagulayo
Inkumbulo yomfazi wakhe oshonile uConstantine wadala isiseko sokunceda abantwana abanomdlavuza. Ukususela ngo-2008, i-Habensky Foundation iye yakwazi ukunceda amakhulu eminyaka abantwana abanesifo esifanayo kwiminyaka eyisixhenxe edlulileyo ethatha umfazi othandekayo kumculi.
UKonstantin Khabensky uthatha inxaxheba ebalulekileyo kwimisebenzi yentlangano, uhlala ehleli kwiintlanganiso kunye nezigulane ezincinci, kwaye uququzelele neentando zabantwana kulo lonke ilizwe.
Indodana yomdlali we-Ivan sele sele ikhulile, kwaye kunye kunye noyise uyavuya ukuthatha inxaxheba kwiiprojekthi zakhe zokunceda.
Umfazi wesibini waseKhabensky u-Olga Litvinova
Ukuthandwa komdlali-mdlali kwadala amahlebezi amaninzi ngobomi bakhe. Kwaye kwaba namahemuhemu ukuba emva kokufa kuka-Anastasia, umlingisi wayenothando olutsha. Amaphephandaba amxelele umtshato wakhe eMelika, wachaza malunga neveli kunye nomntu owayengumdlali weqela "uLiceum" u-Lena Perova.
UKonstantin Khabensky no-Olga Litvinova balinde umntwana. Funda iinkcukacha apha .
Azikho izimvo kunye nokukhanyela kwi-actor engazange afike, akazange amncede nayiphi na ulwazi malunga nobomi bakhe obubonakalayo kumaphephandaba. Nangona kunjalo, ekwindla ka-2013 kwaziwa ukuba umdlali wenyathetha kwakhona. Kwiofisi yeRejista uKhabensky wahamba kunye nomlingane wakhe kwiholo lezemidlalo Olga Litvinova.
Ngokuphathelele ukuba uKonstantin no-Olga banomxholo, ngokokuqala ngqa kukho iingxoxo kwiminyaka ethile edlulileyo. Ababini babesoloko beqaphela kunye ngaphandle komsebenzi: ke kwi-premiere yefilimu, ke kwi-rink ...
Umhlobo ka-Olga Litvinova utshele abaphephandaba ukuba lo mbhangqwana unokuqonda kunye nothando:
"UKostya no-Olya baqala ukudibana, ngoko ke kwasala ixesha elithile, bexabana. Kubonakala ukuba, basebenzisane. Kodwa ngoku bafana nje. Bathande kwaye baqonde ngokupheleleyo. Sekude silinde ukuba batshatile. Kodwa uKostya wayedonsa yonke into ngesiphakamiso sesandla nentliziyo, mhlawumbi wayesaba. Sekunjalo, intlungu endala ihlala emphefumlweni "
Ophumeleleyo ebomini: uAnna Mathison kunye nobomi bakhe abucala
Ubomi bomntu siqu kaYevgenia Dmitrieva. Umdlali uhlala ngokuvisisana naye
U-Julia Akhmedova kunye noRussian White: Inyaniso yonke emayelana nomtshato i-Stand Up ihlaziya
Yiba ngowona mhle kwaye uyintanda kuye
Ukukhangela uYobhi: i-shed schedule
Indlela yokutshata umntu osisityebi
Indlela yokuhamba ngexesha lokukhulelwa?
Ukuhlwayela ikhalenda ngo-2016: isivuno esihle kunye nehlobo lasefudumele
Ngaba luncedo kangakanani ukuhamba nenja?
Umlomo kaSergei Zverev wamothusa ababhalisile baka Xenia Borodina
Isondo lesigxina - inzala ye-hormone NovaRing
Indlela yokuthatha i-ginger yokulahleka kwesisindo
Gymnastics yaseHibmon yaseHormon
Iipropati eziwusizo zejusi lompu
Iimvumba eziphathekayo zentwasahlobo
UAnastasia Volochkova watshata